Kalluumeysatada, dhididka ragga ee nolol maalmeedka | Ragga Stylish
Qolka Ignatius | | nololeedka, fashion
Markaad raadineysid dhar gaar ahaan inaad ku raaxeysatid noocayaga bilaashka ah, ama sidoo kale maalinba maalinta ka dambaysa, haddii shaqadeennu noo ogolaato, waxaa lagugula talinayaa inaad had iyo jeer tixgeliso fursadaha ballaaran ee aan ka heli karno suuqa, isagoo iska dhaafaya cuqdada qaar.
Dharka dhididka ee ragga, in muddo ahba, waxay joojiyeen inay noqdaan dhar ku jihaysan isboorti ama inay wada xirtaan dharka isboortiga. Waqtigan xaadirka ah suuqa waxaan ka heli karnaa tiro badan oo soosaarayaal ah oo na siiya dharka noocan oo kale ah, kuwaas oo aan ku qasbanaaneyno inaan soo bandhigno shirkadda Sharkers, oo ah shirkad diiradda saartay khadkeeda dharka Khadadka dhididka ee maalin-maalin iyo isboorti labadaba.
1 Maxay Sharkers na siinayaan
2 Dhididka Sharkers
4 Xagee laga iibsadaa?
Maxay Sharkers na siinayaan
Kalluumeysatada ayaa na siiya tiro ballaaran oo ah dhididka ragga dhammaan munaasabadaha iyo xilliyada sannadka, dhididka oo ka samaysan dhar kala duwan oo noo oggolaanaya in la ilaaliyo maalmaha qabow ama maalmaha cimiladu bilaabmay inay nasasho na siiso oo aan bilaabi karno adeegsiga dhar fudud oo noocyo badan leh. Intaa waxaa dheer, moodooyinka kala duwan ee dhididka ee shirkadani na siiso, noo oggolow ku dar chinos, jooniska caadiga ah ama googo kale, xitaa surwaal aan caadi aheyn oo leh fallaadho aan caadi ahayn.
Soo-saarahaani wuxuu na siiyaa qaabab kala duwan oo ah dhidid, qaabab noo oggolaanaya inaan u isticmaalno munaasabad kasta iyo sidoo kale inay na siiso kala duwanaansho ballaaran marka ay timaaddo xulashada nooca dharka aan dooneyno inaan xirno labadaba maalinba maalinta ka dambeysa, sida kulan lala yeeshay asxaabta, casho aan rasmi ahayn ...
Hoodie oo jeebado wata. Kani waa dhididka dhidibada loo yaqaan 'classic sweatshirt' ee aan wada ognahay xaqiiqdiina in qaar idinka mid ahi ay leeyihiin ama soo mareen waqti uun.
Koofiyad hooded oo leh jeebado iyo siib. Moodelkani wuxuu ina siinayaa kala duwanaansho ballaadhan maalmahaas marka waqtigu aanu si fiican u garanaynin meesha la jiidayo. Waad ku mahadsan tahay jiinyeerka dhexe, waxaan u qaadan karnaa mid furan iyo mid xiranba, iyadoo loo eegayo baahiyaheena iyo kuwa waqtiga.
Koofiyad hooded oo aan jeebabka lahayn. Moodelkani wuxuu leeyahay taabasho aad u qurux badan, adoo tirtiraya jeebadaha xogta, sidaa darteed waxaan iska ilaalinaa inaan u isticmaalno sidii inay yihiin boorsada dhabarka, wax mararka qaarkood badankood, ka dhigaya dharka mid fool xun marka lagu daro sameynta sheyga.
Dhar adag oo huffan oo huwis ah oo leh laba jiinyeer dhinacyada. Moodelkan gaarka ah ee dhididka ayaa ah midka caan ka noqday, dharka noocan ah gudahiisa, taas oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah inay na siiso raaxo iyo waasac aannaan ka heli karin moodooyinka kale.
Hood ama jeebab malahan. A classic oo ahaa astaantii 90-maadkii iyo tan maanta wali ka mid ah dharka ugu isticmaalka badan markay timaaddo labbiska hab quruxsan laakiin aan rasmi ahayn. Weligood kama baxayaan qaab dhismeedka waana dhammaystirka saxda ah ee maalmo marka heerkulbeegga uusan heli karin meel go'an.
Ahaanshaha isticmaale joogto ah nuucaan oo kale ah, waligey fursad uma helin inaan isku dayo dhididka ka soo baxa sumaddan waana inaan qiraa in Aad baan ula yaabay, kaliya maahan naqshadeynta iyo raaxada ay na siiso, laakiin sidoo kale tayada labadaba dhammeystir iyo qalabka loo isticmaalay labadaba.
Adiga oo noo siinaya jiinyeer xagga hore ah, waa nooca ugu habboon xilliga gu'ga, xilligaas sanadka marka jaakaddu bilaabaan inay noqdaan dhar culus, iyo sidoo kale diirimaad, oo aynaan ku geli karin shaati gacmeedyo, maadaama ay tahay dhididkan dharka ugu fiican ee aan u isticmaali karno labadaba guga iyo deyrta.
Moodelkan waxaa lagu heli karaa isku-darka buluug-buluug ah qaybta sare, oo ay ku jiraan gacmo-gacmeedka illaa suxulka, halkaas oo bidixda aan ka helayno magaca sumadda, iyo caddaan qaybta hoose, halkaas oo jeebka dhinacyadu ku yaalliin iyada oo aan lahayn jiinyeer . Qaybta dhexe waxaan ku leenahay jiinyeer noo ogolaanaya inaan si dhakhso leh ula qabsano isbeddelada lama filaanka ah ee cimilada. Shaati-gacmeedka oo dhan, oo aan tirineynin daboolka, wuxuu ka samaysan yahay cudbi iyo elastane, wuxuu na siinayaa a dahaarka dhogorta ee gudaha taas oo naga ilaalin doonta qabowga.
Siibbada aan ku xiri karno dhididka daboolaa ilaa qoorta, sidaa darteed waxaan u baahanahay inaan soo qaadanno shaar dheeri ah marka hawada qabow ay bilowdo inay sameyso muuqaal. Si ka duwan noocyo kale oo dhidid ah, siibada waxaa loo tolaa hab aan marna loo baahnayn inaan ka xoqno cidhifyada halka ay marayso, wax aad ugu badan dharka noocan ah.
Jeebka dhinacyadu waxay na siinayaan meel ku filan oo aan ku kaydin karno furayaasha ama xoogaa lacag ah marka lagu daro gacmaha marka uu bilaabo qabow ama aan doonayno inaan si fiican u raaxaysanno na siinaya meel ku filan oo aan ku keydin karno moobaylka iyada oo aan loo marin halista ah in la tuuro iyada oo ay ugu wacan tahay dhererkooda. Laf ahaanteeda, markaad fadhido ama aad kacaysid, waxaa lagugula talinayaa inaad gacantaada gashato jeebabkaaga si aad u hubiso inaanan hoos u dhigin wax ka mid ah waxyaabaha ku jira hawsha.
Marka laga hadlayo daboolka, qayb muhiim ah oo ka mid ah dhididka, tani waa la hagaajin karaa waxayna ka sameysan tahay polyester iyo elastane waxayna na siineysaa meel ku filan oo lagu ilaaliyo madaxa oo dhan laakiin iyadoo wajiyadayaga la daaharo, si aan u siino dareen qaldan dadka hareerahayaga ah.
Si loo daboolo daboolka, moodeelkan Sharkers wuxuu na siinayaa xarig cad oo fidsan rivets lacag dhamaadka, iyadoo siineysa taabasho asal ah oo shaqsiyeed oo aanaan ka heli karin soo saarayaasha kale. Aagga xadhigga kuu oggolaanaya inaad ku hagaajiso daboolka madaxayaga, wuxuu leeyahay muraayad buluug ah, oo la mid ah qaybta sare ee dhididka.
Dharka dhididka ayaa laga sameeyay cudbi a 60%, 35% polyester iyo 5% elastane, sidaa darteed waxay sifiican ugu habboon tahay qaabka jirkeena. Waxaa lagu heli karaa cabirro kala ah S, M, L, XL iyo XXL, sidaa darteed wax dhibaato ah kuma la kulmi doonno helitaanka tusaalaha ugu habboon baahiyahayaga. Nooca 'XXL Model', oo aan isku dayay falanqeyntan, waa mid aad u ballaadhan, oo aan ku xirnayn cabirrada caadiga ah ee ka sokow dharka aan ka heli karno xarumaha dukaamaysiga.
Xagee laga iibsadaa?
Shakers waxay na siinayaan a bogga internetka halkaas oo aan ka heli karno dhammaan moodooyinka dhididka ee ay dhigeyso annaga. Nooca aan ku falanqeynay qodobkaan Waxay leedahay qiimo dhan 30 euro. Kharashka rarka ee alaabada oo dhami waa bilaash waxaanan ku bixin karnaa lacag PayPal ama kaararka amaahda ama debit-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Sharkers, dhididka ragga ee maalin kasta